May 2017 - Page 2 of 12 - Puntland Mirror Believable Media Website
Garoowe-(Puntland Mirror) Dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka qaybihiisa kala duwan ayaa u diyaargaroobaya bisha barakaysan ee Ramadaan. Dadka ayaa iibsanaya noocyada kala duwan ee cunada si ay ugu afuraan halka suuqayada ay buux dhaafiyeen […]
Garowe-(Puntland Mirror) Somali people around the country are preparing for the holy month of Ramadan. The people are buying different foods for iftar while marketplaces are full of Ramadan goods including numerous of vegetables, such […]
Doha-(Puntland Mirror) Wasiirka Gaashaandhiga Soomaaliya Cabdirashiid Cabdulaahi Maxamed ayaa magaalada Dooxa kulan kula yeeshay dhiggiisa Qatar Khalid bin Mohammed Al Attiyah. Cabdirashiid iyo Khalid ayaa ka wadahadlay arrimo la xirrira ammaanka oo ay kamidtahay dagaalka […]
Doha-(Puntland Mirror) Somali Defence Minister Abdirashid Abdullahi Mohamed met his Qatar counterpart Khalid bin Mohammed Al Attiyah in Doha. Abdirashid and Khalid discussed issues related to security including the fighting against Al-Shabab armed group, according […]
The recent interim agreement on the issuance of licences for fishing Tuna and Tuna-like Species between the Federal government of Somalia and the Federal Member States is reported to be floundering. It has been reported […]
May 24, 2017 Abdi Omar Bile 0
Muqdisho-(Puntland Mirror) Ugu yaraan afar qof ayaa lagu dilay qarax gaari oo ka dhacay gudaha Muqdisho galabta oo Arbaco ah, sida ay sheegeen ilo-wareedyo dhanka ammaanka ah. Gaari laga soo buuxshay walxaha qarxa ayaa lagu qarxiyay […]